Krizy politika : manameloka ny FATE ny 80%n’ny Malagasy (+vidéo)
Tonga nizara ny alahelony teo amin’ny Kianjan’ny Finoana ny tantsaha iray avy any amin’ny faritra V akinankaratra. « Efa tamin’ny 2009 no nokasaina haripaka ny tantsaha » hoy Rajao. Nazavainy tamin’izany fa ny fikasan’ny FATE hampidina ny kilaon’ny vary ho 500 ariary dia midika avy hatrany fanaovana antsojay amin’ireo izay mivelona amin’izany lalam-pihariana izany. « Fifampitsinjovana no ilaina » hoy izy « fa tsy ronono an-tavy ».
Ankehitriny dia midangana avokoa ny vidin-javatra ary tsy voafehin’ny FATE izany satria tsy manana ny fahaiza-manao ilaina amin’ny fitondrana Firenena ry zareo. Hatrany amin’ny arina fandrahoana aza dia miaka-bidy nohon ny fahatapahan’ny lalana maro itaterana izany akora izany. Latsain’ny teniny ankehitriny ireo mpomba ny FATE sasantsasany satria vao misy lalana tapaka maromaro dia sahirana ny eto an-drenivohitra nefa izy ireo dia nahay vava ery nilaza fa « tsy azo hanina ny lalana ». Amin’ny tantsaha moa dia tsy manana finiavana hivoaka amin’ny krizy izany ry tgv sy ny forongony satria mamy loatra vola. Ny vahoaka anefa mandry tsy lavo loha andro aman’alina noho ny tsy fandriampahalemana ary namafisin-dRajao aza fa «raha mitohy izao dia hanafatra omby avy any ivelany isika satria lasan’ny dahalo avokoa izany».
16/02/2012 : Giovanna : enina no namoy ny ainy tao Moramanga (+vidéo)
Potika amin’ny 60% ny tananan’i Moramanga raha ny tatitra nataon’ny mpikambana ao amin’ny Kongresin’ny tetezamita avy any an-toerana. Ankoatra ny fahasimbana ara-materialy dia nisy ny mpiray tanindrazana namoy ny ainy tany an-toerana. Raha ny tatitra vonjy maika dia enina no isan’izy ireo hatramin’ny androany. Ahiana anefa ny hitomboan’izany afaka andro vitsy satria mananosarotra ny famonjena ny tra-boina amin’izao fotoana. Mitambesatra amin’ny FATE ny tsy fisian’ny fanampiana avyany ivelany ary mihatra amin’ny vahoaka izany ankehitriny satria isan’ny manampy betsaka amin’ny fotoanan’ny andro ratsy toa izao izany nefa dia sarotra ny manantena noho ny tsy maha-ara-dalàna ny mpitondra.
Manana vaomiera manokana misahana ny vonjy taitra ihany ny vondrona iraisam-pirenena isan-tokony saingy tsy hahasahana manontolo ny filan’ny Malagasy izany. Araka ny nampitain’i Randriamamizafy Ignace ary dia ny mpiara-monina ihany no hijery ny fomba hifamonjena sy hifanampiana satria miezaka mitana ny soatoavina Malagasy izy ireo ka miara-miaina « toy ny trano atsimo sy avaratra, izay tsy maha-len-kialofana » .
Situation du 16 Février 2012 à 13h00
• Nombre total des communes victimes au niveau des districts sinistrés : 657
• Nombre de communes ayant fournies des données : 66
• Décédés : 17
• Blessés : 65
• Disparus : 3
• Sinistrés : 24096
Nombre de personnes déplacées regroupées
• Cas des communes chefs lieu : 1092
• Cas des communes en dehors du chefs lieu : 6470
Cases d'habitations locales
• Totalement Détruites : 3736
• Endommagées (décoiffées) : 1729
• Inondées : 212
BNGRC_-_BILAN_PROVISOIRE_GIOVANNA.pdf 825.98 Ko
16/02/2012 : Tgv : sahy niantsy an’Andriamanitra ! (+vidéo)
Tamin’ny lahateny nataony nnadritra ny fifampiarahabana nahatratra ny taona 2012 teo amin’ny andrim-panjakana dia nentim-po i tgv ka nirehareha fa afaka manakana rivotra. Nolazainy tamin’izany fa na rivotra inona na rivotra inona rehefa mitondra ratsy ho an’ny Firenena dia ho sakanany. Tsy zakany mantsy ny lahatenin’i Mamy Rakotoarivelo nanambara avy hatrany fa ho avy tsy ho ela ny Filoha RAVALOMANANA koa dia nampitoviny tamin’ny rivodoza ny Filoha RAVALOMANANA ary sahy niantsy ny natiora sy Andriamanintra nanao izao rehetra izao izy. Iray volana mahery aty aoriana dia nasehon’ny Nahary azy fa tsy azo atao ny mifaninana sy manao vava tsy voahevitra mikasika ny natiora sy ny namorona azy.
Tsy vitan’i tgv ny nisakana an’i Giovanna. Ary na ny fiomanana amin’ny fandalovany aza dia tsy tontosany. Efa andro maro tokoa manko no fantatra fa handalo eto amintsika io rivodoza io saingy raha ny fantarra sy ny hita maso tamin’ny 14 febroary dia tsy niomana tamin’izany velively ny FATE. Porofon’izany ny tsy fahazahoan’ny mpiray tanindrazana maro ny vaovao marim-pototra mikasika ny fandalovan’izany rivo-doza izany noho ny fahatapahan’ny hainoamanjerim-pirenena fotoana naharitra tamin’io andro io. Azo lazaina fa tsy fahaizana mitondra ihany koa ny fahataran’ny fampandrenesana ny olona amin’ny tokony hivatsiana tahiry isan-tokantrano tamin’io andro io. Efa ny 13 febroary tamin’ny 09 ora alina manko vao namoaka fanambarana momba izany ny fiadidian’ny praiministra raha tokony andraikitr’Ambohitsorohitra ny manao izany. Izany rehetra izany dia nitarika fahafatesan’ny mpiray tanindrazana 17 sy tsy manan-kialofana an’arivony na dia mbola tombana vonjy maika ihany aza izany. Asa na mba afaka mandray anatra amin’izany ny FATE na tsia fa hita fa manomboka tsy manome rariny azy ihany koa ny natiora hatreto.
27/01/2012 : Sampam-pampianarana Siansa : misy mizana tsindrian'ila eny Ankatso (+vidéo)
Mitaraina ireo mpianatra ao amin'ny "Faculté des Sciences" eny Ambohitsaina satria tsy mbola misy tokontaniny ny momba ny fanadinan'izy ireo. Ny an'ny sampam-pampianarana hafa anefa dia efa vita tanteraka ary misy ny hiatrika ny fiodianana faharoa amin'ny Alatsinainy izao. Mahatsiaro tena tsy misy miraharaha ireto mpianatra ireto noho izany ka manome hatramin'ny Alatsinainy izao hamahan'ny FATE sy ny SECES ny olana eo amin'izy ireo mba tsy ho ny mpianatra no hatao takalonaina toy izao. Tsy eken'izy ireo ihany koa ny ampibabena azy ireo ny vokatrin'ny fivakisana eo amin'ny mpampianatra mpikaroka fa rehefa tsy mianatra dia miara-tsy mianatra ary amin'izao zava-mitranga eny Ambohitsaina izao dia tokony hampitoviana ny zava-bitan'ny sampana rehetra izay vao mitokona ny mpampianatra raha hanao izany. Hiatrika fivoriam-be ireto mpianatra ao amin'ny siansa ireto ny Alatsinainy ho avy izao handraisany fanapahan-kevitra amin'ny fepetra ho raisin'izy ireo manoloana izao mahazo azy izao.
11/01/2012 : Ambohitsaina : miainga any amin’i TGV ny olana (+vidéos)
“Ny tsy fahaiza-mitantana ao amin’ny fitondrana no fototry ny olana ety Ankatso” hoy ny solotenan’ny mpianatra. Nanao sonia ny minisitry ny vola tamin’ny fiandohan’ny taona mikasika ny hamoahana ny vola ho entina mampiodina ny anjerimanontolo saingy tsy voatana hatramin’ny farany izany satria misy ireo sampam-pampianarana tsy mbola manana “budget de fonctionnement” ary ny karaman’ny mpampianatra mpikaroka dia tsy mbola voaefa ara-dalàna nefa isan’ny vondrona mampiodina ny tontolon’ny fampianarana ambony. Samy melohin’ny mpianatra avokoa ny fihetsiky ny mpitondra sy ny fihetsiky ny mpampianbatra mpikaroka noho ny tsy fitsinjovana ny fianaran’ny mpianatra.
Raha ny kajy nataon’ireo mpianatra anefa dia 0,2%n’ny tetibolam-panjakana monja ny an’ny fampianarana ambony.
Misy fizarazarana eo amin’ny mpianatra
Misy fahasamihafana raha ny fahitana ny fomba fitondana ny hetsika eny amin’ny anjerimanontolo satria toa misy ny vondrona sasany te-hivatratra ary misy kosa ireo maka milamina ary miandry sy mitazana ny zava-mitranga. Raka ny vaovao voaray dia saron-tava ihany ny an’ireo miseho mahery fihetsika satria mandry vola avy amin’ny olona akaiky ny FATE ary natao « handamina » ny hetsika eny Ambohitsaina. Nahagaga tokoa fa tamin’ny 11 ora atoandro teo ho eo dia nanapa-kevitra ireto « mahery fihetsika » ireto fa hanantona ny ny filohan’ny oniversite satria « manana vaovao » hambara amin’izy ireo hono izany tompon’andraikitra izany.
09/01/2012 : Fampianarana ambony : ananan’ny mpianatra vola ny fanjakana (+vidéo)
Tsy mbola naverin’ny fanjakana sy ny fitantantanana ny oniversite ny vola 10000 Ariary isaky ny mpianatra hatramin’izao. Tamin’ny fidirana 2010-2011 dia nampiakarina ny saran’ny fisoratana anarana hiditra eny amin’ny anjerimanontolo. Noho ny fahataran’ny fidirana anefa dia nampiaka-peo ny mpianatra ary isan’ny notakian’izy ireo ny famerenana io ambony apanga tamin’ny fisoratana anarana io. Nanaiky izany ny ministra tomponan’andraikitra tamin’izany fotoana saingy hatramin’izao dia tsy mbola voarain’ny mpianatra izany volany izany. Isan’ny fitakiana entin’ny mpianatra ankehitriny ny famerenana izany volan’izy ireo izany mba ho marikiny ny fanajana ny teny nifanomezana .
Hidina … “esplanade” farafahakeliny !
Manoloana ny fikatsoana tanteraka eny amin’ny tontolon’ny fampianarana ambony dia nanapa-kevitra ny handray andraikitra indray ny “associations pédagogiques” eny Ambohitsaina. Amin’ny Alarobia ho avy izao dia hanatanteraka fivoriam-be miaraka amin’ny mpianatra rehetra izy ireo handraisana fepetra manoloana izao toe-draharaha izao. Isan’ny tena mikaikaika amijn’izao fotoana ireo mpianatra avy any amin’ny Faritra mandranto fianarana eto an-drenivohitra na ny mifamadika amin’izany. Tao anatin’ny fitokonana nataon’ny mpampianatra mpikaroka mantsy dia tsy mbola fantatra mazava ny tetiandro amin’ny fiatrehana ny fanadinana isan-karazany. Noho izany dia tsy afaka miverina amin’ny Faritra niaviany ireo mpianatra ireo ka voatery nanao fety lavitra ny fianakaviana.
Raha ny fantatra anefa dia tsy mbola ato ho ato no hiverina amin’ny laoniny ny fampianarana ambony satria, ankoatran’ny tambin-karama isan-karazany, dia mbola nisy tamin’ireo mpampianatra mpikaroka no tsy mbola nandray karama hatramin’ny volana jiona 2011 no mankaty. Hiatrika fivoriam-be nasionaly ihany koa noho izany ireo mpampianatra mpikaroka rahampitso talata 10 janoary ary handefa solontena avokoa ny oniversite dimy ankoatra an’Antananarivo mpampiantrano.
23/12/2011 : Mifety anaty fahoriana ny fianakaviana Malagasy (+vidéo)
Tsy misy fifaliana ny fankalazana ny krisimasy sy ny taom-baovao amin’ity indray mitoraka ity raha ny fahitana ny eny an-tsena sy ny endrikin’ny renim-pianakaviana. Ireto farany dia mahatsapa fa efa mihatra any anaty vilany ny fahantrana ankehitriny noho ny krizy lava reny lalovan’I Madagasikara. Tsy mahavita mifantoka amin’ny fizarana fifaliana amin’ny fianakaviany intsony izy ireo fa mikatro-doha mitady izay hohanina isan’andro sy ny fomba hitantanana ny kely miditra ao an-tokantrano. Ny fianaran’ny ankizy rahateo ihany koa tsy mandeha amin’ny laoniny noho ny fiatoan’ireo fanampiana rehetra nomen’ny fanjakana tany alohan’ny 2009.
Ireo fanampiana ireo dia nanamora kokoa ny vesatra zakain’ny Ray aman-dReny ao anatin’ny ankohonana sady nanosika ny fahavitrihan’ny kilonga namonjy sekoly. Ny any amin’ny distrika ambanivohitra moa dia mbola ampian’ny fitaintainana amin’ny tsy fandriam-pahalemana. Raha misy tanàna iray nilamina dia lasa mandry an-driran’antsy ankehitriny, raha hala-botry no hita tao taloha dia efa miakatra amin’ny vaky trano izy amin’izao fotoana, ary raha omby no nangalarin’ny dahalo taona vitsy izay dia efa manapitra aina izy ireo tato anatin’ny telo taona. Ohatra velona amin’izany ny ao amin’ny Faritra Bongolava. Izany no manamarika fa tany tsy misy lalàna Madagasikara hatramin’ny nisian’ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Izany rehetra izany dia manamafy ny hetahetan’ny vahoaka miandrandra ny fiverenan’ny Filoha RAVALOMANANA Marc mba hamerina amin’ny laoniny ny gaboraraka sy hanorina tontolo mendrika ny hasin’ny Malagasy tsirairay avy.
19/12/2011 : SMM vs Polisy : … dia afaka avokoa ny gadra rehetra ! (+vidéo)
Herinandro izao no nifandrirotra lava ny mpitsara sy ny polisy noho ny raharaha iray izay namoizana ny ain’ny mpitsara iray tany Toliara. Polisy maromaro no volaza fa namono nahafaty azy taorian’ny hatezeran’izy ireo noho ny fampidirana am-ponja ny namany. Voarohirohy tamina fanafihana mitam-basy tany Toliara anefa ity polisy ity saingy notakian’ny namany ny famoahana azy.
An’iza ny lalàna ?
Androany dia nentin’ny Polisy sy ny Zandary teny amin’ny lapan’ny Fitsarana ireo olona manan-draharaha ao amin’ny fitsarana ka tokony nalefa eny amin’ny fampanoavana. Nisy ny fihaonan’ny solotena avy amin’ny sindikan’ny mpitsara ary voalazan’ny avy amin’ny polisy sy zandary iraka avy amin’ny Jly Baomba dia ireo mpitsara no nilaza taminy hoe avoaho ireo efa notanana mihoatra ny 48 ora.
Taorian’ny fivoriam-be nataon’izy ireo kosa anefa dia nilaza ny tao amin’ny SMM fa tsy niteny izany velively fa “kajikajy avo lenta no anton’ny fihetsika nataon’ny EMMOREG androany”. Nomarihin’ny sindikan’ny mpitsara eto Madagasikara fa mbola manohy ny fitokonana izy ireo mandrapaha-tanteraka ny fitakian’izy ireo. Taorian’ity loza nitranga tany Toliara ity tokoa dia nitaky ny fialan’ny ministrin’ny filaminana anatiny sy ny fampidirana am-ponja ireo polisy nahavanin-doza ny SMM. Ankoatr’izay dia nomarihin’ny filohan’ny SMM fa tsy maintsy fivoriam-be ihany no manapaka ny fiverenana miasa satria io no nanapaka ny fanombohana ny fitokonana. Nomelohin’izy ireo moa ny tsy fandraisana andraikitra ataon’ny fitondrana foibe izay fositra nahatonga ny tantara hitatra toy izao.
29/11/2011 : JIRAMA : tsy misy miraharaha ny fijalian’ny vahoaka
Efa volana maro izao no niteraka fijaliana ho an’ny vahoaka Malagasy manerana ny Nosy ny fahatapahan-jiro lavareny . Toa tsy misy mijery anefa ny momba izany fa ny hanenjika ny toerana politika no mahamaika ireo rehetra mahazo ny departemanta misahana ity resaka jiro ity. Ny eto an-drenivohitra dia tsy misy andro mihiratra fa tsy maintsy misy fahatapahana izany jiro izany ary manodidina ny ora roa ka hatramin’ny adin’ny enina izany ankehitriny. Ny any amin’ny faritra moa dia maharitra hatramin’ny roa andro ny kitroka matetika.
Tsara ny manamarika fa efa nisy ny mpiara-monina amina fokontany maromaro nampiaka-peo ka nanao hetsika fanehoan-kevitra mikasika izany indray sabotsy saingy toa tsy nisy nanohy izany. Ity “délestage” ity anefa dia misy fiantraikany amin’ny fiainana an-davan’andron’ny Malagasy manomboka any amin’ny fihariany ka hatramin’ny fandriampahalena eny amin’ny manodidina ny tsirairay. Isan’ny manome vahana ny vaky trano sy ny fanendahana any anaty tanàna any tokoa ity zava-doza ataon’ny Jiro sy Rano Malagasy ity.
Vain-drahalahy tsy maharary
Ny mahasorena ny mpanjifa matetika dia ny tsy fifampitsinjovana rehefa tojo fahasahiranana. Raha sendra tara ohatra ny fandoavanan ny volan’ny JIRAMA dia tsy misy hatak’andro avy hatrany ny fanapahana ny jiro ao an-tokantrano. Setrin’izany anefa dia haizina no omena ny mpiray tanindrazana amin’ny ora tena tsy mampety izany. Toa mandatsa ny ambany lanitra ny fahitana ireo takamoa (ampoules) mirehitra tontolon’ny andro eny amin’ireny andrin-jiron’ny kaomina ireny. Eto vao tsaroana fa toa ny PDS-n’Antananarivo renivohitra no filohan’ny filankevim-pitantanana an’ity orinasam-bahoaka ity ka ka izany no mety mahatonga azy misora-tena ho afaka manao izay danin’ny kibony.